Xiaomi က AR မျက်မှန် မူပိုင် ခွင့်ရ - Pandaily
Xiaomi က AR မျက်မှန် မူပိုင် ခွင့်ရ
May 31, 2022, 17:13ညနေ 2022/05/31 23:22:15 Pandaily
China Enterprise Data Platform ၏ ကောင်းကင် မျက်လုံး စစ်ဆေး မှုက ပြသ ခဲ့သည်စားသုံးသူ အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီကြီး Xiaomi မှ တင်သွင်းသော AR မျက်မှန် မူပိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာအင်္ဂါနေ့က တရားဝင် အတည်ပြုခဲ့သည်။
မူပိုင်ခွင့် စိတ္တဇ တွင် AR မျက်မှန် များတွင် frames များ၊ frames များ၊ power supply များ၊ motherboard assembly များ၊ waveguide assembly များနှင့် circuit assembly များပါဝင် သည်ဟု အကြံပြုသည်။ အထူးသဖြင့် ပထမ ဦး ဆုံး power supply ကိုပထမ frame တွင်တပ်ဆင် ထားပြီး motherboard assembly ကို ဒုတိယ frame တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
Xiaomi ကတော့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် AR Glass Product ကို မထ ုတ် ပြန် ရသေး ေပက်င္း အေျခစိုက္ ကုမၸဏီဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ ႏွစ္ ေလာက္က VR မ်က္ မွန္ ေတြကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ခဲ့ေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္း ေအး စက္ လာတဲ့ VR Bush ေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္ ကို Update မလုပ္ ျဖစ္ ခဲ့ပါဘူး။
Xiaomi ရဲ႕ VR မ်က္ မွန္ (Credit:Xiaomi )
နောက်ဆုံး IDC ခန့်မှန်းချက် အချက်အလက်များအရစုစုပေါင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ AR/VR ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၄. ၆၇ ဘီလီယံ နီးပါး ရှိပြီး ၂၀ ၂၆ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၇၄. ၇၃ ဘီလီယံ အထိတိုးလာ မည်ဟု ခန့်မှန်း ထားပြီး နှစ်စဉ် တိုးတက်မှုနှုန်း (CAGR) သည် ၃၈. ၅% ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် လာမည့် ငါး နှစ်အတွင်း တရုတ် စျေးကွက် ၏ CAGR သည် ၄၃. ၈% သို့ရောက်ရှိ နိုင်ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ် တွင်ပထမ နေရာတွင်ရှိသည်။
VR/AR ေစ်းကြက္မွာ ၿပိဳင္ ဆိုင္ မႈ အလြန္ ျပင္းထန္ ပါတယ္။ ပစ္စည်းကိရိယာများ တင်ပို့ ရောင်းချ မှု ဆက်လက် တိုးတက် နေခြင်းကြောင့် တရုတ် ၏အဓိက VR/AR ထုတ်လုပ်သူ Goltec သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က လည်ပတ် မှုမှ ယွမ် ၇၈. ၂ ၂၁ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁. ၇၅ ဘီလီယံ) ရရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၃၅. ၄၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ အဆင့်မြင့် VR တင်ပို့ ရောင်းချ မှု ရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားပါတယ်။ VR/AR ထုတ်လုပ်မှု တွင်၎င်း၏ ဦး ဆောင်မှု ကိုမြှင့်တင်ရန် GoerTek သည် AR မျက်မှန် များ ကိုလုပ်ဆောင် နေသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Xiaomi VR ဒါရိုက်တာ ဟောင်း Majeson သည် Bytedance ၏ Pico နှင့်ပူးပေါင်း ခဲ့သည်
Goltec ကဲ့သို့သော စက်ရုံ တစ်ရုံ လုံး အပြင် VR/AR စက်မှုလုပ်ငန်း ကွင်းဆက် ၏အထက် ပိုင်း ရှိ display နှင့် optical solutions ကဲ့သို့သော အဓိကအစိတ်အပိုင်း ခွဲ များတွင် supply chain ပြိုင်ဆိုင် မှုကို စတင်ခဲ့သည်။ Display market တွင် BOE, TCL Zhongxing Optoelectronic Technology Co., Ltd., Corning နှင့်အခြား display industry chain ကုမ္ပဏီများသည် VR/AR hardware ၏အထက် ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် မှ ခြေကုပ်ယူ ရန်ကြိုးစားသည်။
Gadgets Apr 28 ဧပြီ 28, 2021